CIN Khabar विपद्को बेला कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
गीता चिमोरिया बुधबार, असार ३१, २०७७, ०८:४३:००
काठमाडौं । निरन्तरको वर्षाले देशभर बाढि र पहिरोको कहर छ । कतै डुबान छ भने घर, भवन, सडक र पुल भत्किएका छन् ।
पहिरोको जोखिमले कयौ गाउँमा बासिन्ता राती निदाउन पाएका छैनन । कतै त सिंगै बस्ती डुबानमा परेको छ । यस्तो बेला नागरिक आफैले कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिला त विपद्को बेला एकआपसमा सहयोगी भावना हुनुपर्छ । विपद्को बेला समुदायको सहयोग निकै आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ । विपद्को बेला पहिले आफ्नो ज्यान जोगाउन ध्यान दिनुपर्छ, परिवारका सदस्यहरु सुरक्षित छन् छैनन् ख्याल गर्नुपर्छ ।
सुरक्षित ठाउँमा जाँदा आवश्यक पर्ने, बोक्न मिल्ने सामानहरु सँगै लिएर जानुपर्छ । मोबाइल, टर्च, ब्याट्री, औषधिहरु छुटाउनु हुँदैन । यसो गर्दा अरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्न र खबरहरु सुन्न सजिलो हुन्छ । घरको झ्याल, ढोका, पानीका धाराहरु, विजुलीका स्वीच, पङ्खा, रेगुलेटर बन्द गर्नुपर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
खानाको लागि पर्याप्त सामग्री छ कि छैन ? छैन भने कहाँ पाइन्छ वा कसलाई भन्ने हो, त्यो थाहा पाइराख्नुपर्छ । खानेकुरा थोरै छ भने त्यो कसका लागि आवश्यक छ, बिरामी, साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवति वा सुत्केरी महिला । उनीहरुको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
विपद्पछि आश्रय लिएर धेरै मानिस एकैठाउँमा बसेका हुन्छन्, यो समयमा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरसफाइमा ध्यान दिइएन भने महामारी फैलनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ३१, २०७७, ०८:४३:००